Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia – Page 79 – Marqaannews
Daawo:- Wasiirada Jubbaland oo maanta soo saaray goaano culus iyo Axmed Madoobe oo fariin kale diray.
September 5, 2019 marqaan 2
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta shir gudoomiyay kulanka golaha Xukuumada Jubbaland. Wasiirka Warfaafinta Isgaadhsiinta Iyo Tiknaloojiyadda Jubbaland Mudane Injineer Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed ayaa warbaahinta [Read More]
Degdeg:- DFS oo sheegtay in kenya ay ku dhawdahay inay katanaazusho dacwadda badda.
September 5, 2019 marqaan 1
Xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka Dr Axmed Cali Daahir oo goordhaw hadlay ayaa sheegay in dowladda Kenya ay qarka usaaran tahay inay iskaga baxdo kiiska dacwadda ee ay Ku sheeganeyso [Read More]
DEG DEG+XOG: Somaliland oo ciidamo u dirtay Galbeedka Sool & Walaac laga muujiyey ciidamadaas.
September 5, 2019 Ali Osman 0
Daawo:- Puntland oo sheegtay in Somaliland iyo Alshabaab wada socda ay duulaan kusoo yihiin gobolka Sanaag.
September 5, 2019 marqaan 5
Dowladda Puntland ayaa sheegtay inay heshay xog sheegeysa in gobolka sanaag ay duulaan kusoo yihiin Ciidanka Somaliland iyo dagaalamayaasha Alshabaab oo wada socda Hadalkaan waxaa magaalada Badhan kasheegay taliyaha guud [Read More]
Shirkii dib uheshiisiinta beelaha galmudug oo maanta markale lagu wado inuu ka furmo dhuusamareeb
Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug ayaa waxaa maanta oo Khamiis ah lagu wadaa inuu ka furmo shirka dibu heshiisiinta beelaha degan deegaamada Galmudug. Waxaa magaalada ku sugan dhammaan ergooyinkii ka [Read More]
DFS oo Diyaarinaysa Masuuliyiinta Goob Joog Uga Noqonaya Dacwada Bada Oo Bilaabmaysa Todobaadka Dambe
September 5, 2019 marqaan 0
Dawlada federaalka ah ee soomaaliya ayaa si weyn ugu diyaar garoobaysa fadhiyada ay maxkamada cadaalada aduunka ee ICJ ka yeelanayso dacwada bada ee u dhaxaysa wadamada Kenya. Maxkamada caalamiga ah [Read More]
VIDEO:Qisooyin Cajiib Amina Muuse Weheliye Faysal cali Waraabe Dowladi Siyaad Bare Dagaalkii Sokeeye sidu u Dhacay
Qisooyin Cajiib Amina Muuse Weheliye Faysal cali Waraabe Dowladi Siyaad Bare Dagaalkii Sokeeye sidu u Dhacay
DAAWO VIDEO SUBXANALAH:Abwaan Shaacir oo Sheegay Muuse Biixi Qoomu Luud Hargeysa Kasoo Buuxiyey,Dhaqamada Diinta Ka Hor Imanaya Lagu Arkay Hargeysa
September 4, 2019 marqaan 4
Abwaan Shaacir oo ka Mid Ah Qorayaasha Faro ku Tiriska Soomaaliya Kunool Ayaa Markii Ugu Horeyey Hargeysa Isagoo Jooga Kusoo Bandhigay Dhaqamada Diinta Islaamka Meel Uga Dhacaya ee Lagu Arkay,Waxaana [Read More]
DEG DEG+XOG: Goodax Barre oo si adag u karbaashay Puntland, kuna amray Wasiiradeeda.
September 4, 2019 Ali Osman 0
DAAWO VIDEO DEG DEG:Soomaaliya oo Codayn Uga Adkaatay Mar kale Adis Sababa Ka Dhacday Midowga Afrika
September 4, 2019 marqaan 0
Golahan oo ka kooban 15 dal, ayaa codbixin ay qaadeen oo ku saabsan in ururka Midowga Afrika uu dhex-galo xiisaddan iyo in kale, ayaa Kenya waxaa ka raacay fashil weyn [Read More]
DAAWO VIDEO XOG CULUS:Soomaaliya oo 9 Qodob Soomaaliya Uga Adkaatay Intii Kiiska Socdey..
Dowladda Kenya ayaa la timid xeelado kala duwan, oo lagu marin habaabinayo kiiska muranka badda ee kala dhaxeeya Soomaaliya iyaga oo geed dheer iyo mid gaaban u koray sidii dib [Read More]
DAAWO: Kenya haddii ay ka baaqato Maxkamadda hor-tagideeda Soomaaliya guusha ma yeelanaysaa?
Haddii ay Soomaaliya si cad u diiday dalabka Kenya ee kuwajahan in dib loo dhigo dhageysiga Dacwadda badda ee furmaysa 9-ka bishan, waxay ka dhigan tahay in ay ka baaqsato, [Read More]
Daawo:- Caruur laga afduubtay Boosaaso oo laga soo helay Qandala “Xagee loo waday”.
Taliska qaybta booliska gobolka Bari ee Puntland ayaa warbaahinta u soo bandhigay tiro caruur ah oo ay ciidanku qabteen xilli loo wadey magaala xeebeedka Qandala ee gobolka Bari. Kooxdaan ayaa [Read More]
Haweeneey agaasime looga dhigay wasaaradda gaashaandhiga somalia “Waa markii ugu horaysay abid”.
Wasirka Gaashaandhigga Xukuumadda Federaalka Xasan Cali Maxamed (Amardambe) ayaa magacaabay kusimaha agaasime ee wasaaradda Difaaca Soomaaliya,isagoo u magacaabay qof haweenay ah markii ugu horeysay taariikhda. Marwo Jihaan Cabdullaahi Xasan ayaa [Read More]
Degdeg:- Shirkii Dhuusamareeb oo la shaaciyay in maaanta uu baaqday + Sababta oo la qariyay.
Shirka Dib heshiinsiinta ee beelaha Dega Galmudug oo maanta lagu waday in uu ka furmo dhuus mareeb ayaa la sheegaya in uu baaqay sida ay shegeen qaar ka mid ah [Read More]
Degdeg:- Kenya oo erisay qareenadeedi udoodi lahaa dacwadda badda ee dhawaan furmaysa.
Dowladda Kenya oo tabarteeda isugu geysay arrinta kiiska Badda ee kala dhexeey Soomaaliya ayaa ceyrisay qaar ka mid ah Qareenadii ku matalayey maxkamadda cadaalada adduunka ee ICJ. Madaxweyne Uhuru Kenyatta [Read More]
Shirka dib uheshiisiinta beelaha Galmudug oo maanta kafurmaya dhuusamareeb.
Shirka dib u heshiisiinta beelaha dega deegaannada Galmudug, ayaa lagu wadaa inuu maanta ka furmo Magaalada Dhuusa-mareeb ee xarunta Maamulka Galmudug. Shirkan oo looga hadli doono ,sidii loo dhisi lahaa [Read More]
DFS “Ciidankeena waxay diyaar uyihiin badalida Ciidanka Kenya hadii ay dalka kabaxaan”.
September 3, 2019 marqaan 13
Madaxweyne Farmaajo ayaa diidday codsi goor-dhoweyd uga yimid dalka Kenya kaasoo u dhignaa in dib loo dhigo dacwadda ICJ ee badda, sida ay sheegtay wasaaradda Amnigu. Warka kasoo baxay wasaaradda [Read More]
DEG DEG+AKHRISO: 3 arrimood oo ay Kenya u dalbanayso Dib u dhigida Dacwadda Badda.
September 3, 2019 Ali Osman 3
Warar laga helay dhinaca Diblumaasiyadda ayaa daaha ka rogaya in ay Kenya shalay warqad u dirtay Maxkamadda Cadaaladda Aduunka ee ICJ oo ay kaga codsanayso in kiiska dhageysiga dacwadda Badda [Read More]
Degdeg:- Shir looga hadlayo muranka badda oo hadda kasocda Ethiopia “Ergadii Somalida oo hoolka kabaxday”.
September 3, 2019 marqaan 0
Golaha nabadda iyo amniga ee Midowga Afrika ayaa iminka u fadhiya arrimo la xiriira muranka Badda ee Soomaaliya iyo Kenya. Golahan ayaa ka hadlaya soojeedin ka timid dalka Kenya oo [Read More]
Xog cusub:- Maxaad kala socotaa ujeedka dhabta ah ee safarka MD Biixi kutagay Jabuuti “Wadahadlka Somalia iyo Somaliland”.
September 3, 2019 marqaan 1
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo Wafti uu hoggaaminayo ayaa maanta socdaal ugu baxay dalka Jabuuti. Sida lagu sheegay war ka soo baxay madaxtooyada Somaliland waftiga madaxweynaha ayaa u tagay [Read More]
Daawo:- Sh.Xasan Daahir Aweys oo taageeray hadalkii Sanbaloolshe “Muuqaal cusub oo xiiso leh”.
September 3, 2019 marqaan 2
Sheikh Xasan Daahir Aweys oo kamid ahaa hogaamiyishii Alshabaab isla markaana muddo sanooyin ah ay DFS kuhayso Xabsi Guri ayaa kahadlay hadal saacadihii lasoo dhaafay aad looga hadal hayay baraha [Read More]
Degdeg:- Alshabaab oo soo bandhigtay agaasime madaxtooyo oo dhawaan isku dhiibay.
Ururka Al-shabaab ayaa soo bandhigay Agaasimihii hore ee madaxtooyada Hirshabeelle, oo sida ay sheegayn isku dhiibay Ururkaas. Xasan Cumar Axmed (Xasan Mahdi) oo dhowr bilood ka hor laga qaaday xilka [Read More]
Xog+Warbixin:- DFS wado sharci ah ma umartay Xariga wasiirkii amniga Jubbaland.
Waddo sax ah ma u martay dowladda Soomaaliya xarigga Abdirashid Janan. Ila akhri qoraalka. ———————————————————— Bishii ina dhaaftay ee Aug 31-keedii ayaa magaalada Muqdisho lagu xiray wasiirka Amniga ee Jubbaland [Read More]
Sawiro:- Ciidamo gadoodsan oo qalqal geliyay gaadiid ku safrayay inta udhaxaysa Boosaaso iyo Garoowe.
Ciidamo gadoodsan oo ka tirsan ciidamada Puntland ayaa joojiyey isu-socodka Gaadiidka maraya wadada Laamiga ah ee isku xirta Bosaaso iyo Garowe. Ciidamadan gadoodsan ayaa Fariisin ka dhigtay meel udhaxaysa Degmooyinka [Read More]